फोटो कन्टेस्टको उपाधि आशा मगरलाई - Movies Club Nepal
Home News	फोटो कन्टेस्टको उपाधि आशा मगरलाई
by Movie Club Nepal १७ आश्विन २०७६, शुक्रबार १८:१३ October 10, 2019
१७ आश्विन २०७६, शुक्रबार १८:१३ October 10, 2019
बुटवल | नेपालीहरुको महान पर्व बिजया दशमीको शुभ अवसरमा मुभी कल्ब नेपाल डट कमले आयोजना गरेको दशै बिशेष फोटो प्रतियोगिताको उपाधी बुटवलकी आशा मगरले जितेकी छिन । प्रतियोगितामा बिभिन्न जिल्लाबाट सहभागी रहेका २६० प्रतियोगीलाई पछि पार्दै प्रतियोगी नम्बर १४७ की मगरले उपाधी हात पारेकी हुन् । उपाधी सँगै मगरले चलचित्र छ माया छपक्कैबाट नगद १५ हजार सहित मुभी कल्ब नेपाल डट कम बाट प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गर्ने छिन । धादिंगकि अमिषा थापा मगर दोस्रो बन्न सफल भएकी छिन । उनले इम्पेरिअल एजुकेसनल नेटवर्कको तर्फबाट कोरियन वा जापानिज भाषा कक्षा निशुल्क पढ्न पाउनेछिन । यस्तै, कमल सुबेदी तेस्रो बन्न सफल भएका छन्, उनले टुटु हंगकंगको न. १ कस्मेटिक ब्राण्डको तर्फबाट १०,००० बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्नेछन । यस्तै निशा शर्मा चौथो बन्न सफल भएकी छन्, उनले काट्ने प्रोफेसनल हेयर सलुनको तर्फबाट ५,००० बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्ने छिन । यस्तै करिस्मा कटवालले पाचौ स्थानमा चित्त बुझाएकी छिन । उनले प्रसुन इलेक्ट्रोनिक्सको तर्फबाट ५,००० बराबरको गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्ने छिन । साथै प्रमाणपत्रले संमान गरिने छ।
अन्तिम नतिजा सार्बजनिक गर्दाको समयसम्म अन्य प्रतियोगीहरुको भन्दा सर्बाधिक लाईकका आधारमा बिजेता घोषणा भएको मुभि कल्ब नेपाल डट कमका अध्यक्ष राजिव भुसालले बताए । बिजेता सबैमा बधाई तथा बिजया दशमीको शुभकामना सहित, बिजेता उप बिजेताहरुले पुरस्कार दाबीका लागि कार्तिक १० भित्र मुभी कल्ब नेपालको कार्यलयमा आउनु पर्ने छ ।
Professional Experts Guides-Good Conclusions For Abortion Essays
मिस एण्ड मिसेज तिज–२०७५ फिनाले सम्पन्न !
४ भाद्र २०७५, सोमबार १८:५८
आइफा अवार्ड हुने हल्लाको पछि नलाग्नुस:- आयोजक
२४ असार २०७६, मंगलवार १५:५६
२० श्रावण २०७५, आईतवार १७:२०
‘जय शम्भु’ को एक्सन ट्रेलर
१३ श्रावण २०७५, आईतवार १८:१९
सिजीमा दीपक र दीपिका बिजी (भिडियो)
२५ भाद्र २०७५, सोमबार ११:१९
‘आज हाम्रो भेट भा’को दिन’ गीतमा सरोज खनाल...
२३ श्रावण २०७५, बुधबार ११:४५
मेगा मोडल भैरहवा २०१८ को प्रोमोसनको नयाँ तरिका
२७ श्रावण २०७५, आईतवार १६:४८